“Annagu waa daawanaynaa riwaayada Somaliland” Cali Khaliif | Berberanews.com
Home WARARKA “Annagu waa daawanaynaa riwaayada Somaliland” Cali Khaliif
“Annagu waa daawanaynaa riwaayada Somaliland” Cali Khaliif
“Annagu waa daawanaynaa riwaayada Somaliland waxaanay u taallaa jileyaasha metelaya” Daawo. Cali Khaliif oo farta ku goday Wasiirro hortaagan inay sii socdaan wadahaddalada Somaliland iyo Khaatumo..
Laascaanood(Berberanews)-Hogaamiyaha Khaatumo Cali Khaliif Galaydh, ayaa u jeediyey dhaliil lagu tilmaami karo durid siyaasaddeed oo uu si asluub leh ugu muday xubno kamida Golaha Wasiirrada Xukuumadda Somaliland oo maamulkiisu wadahadallo laba jeer wakhtigoodii dib uga dhacay kula jiro.
Galaydh, ayaa sheegay inay Wasiirradaasi ka soo horjeedaan wadahaddalada u socda Maamulkooda iyo Somaliland, laakiinse taas uu u arko mid lugooyo ku ah danaha labada dhinac ee ku aaddan in xal laga gaadho khilaafka jira.
sidaasna wuxuu ku sheegay waraysi kooban oo lagu baahiyey mareegaha wararka Sabtida maanta, waraysigaasoo uu sidoo kale ku cadeeyey in loollanka u diyaar-garowga Doorashada madaxtinimada ee Somaliland saameyn ku yeellanayo natiijo laga gaadho wada-xaajoodka u socda Somaliland.
kulankii shanaad ee wadahaddalada Somaliland kala dhexeeya Khaatumo oo loo balansanaa in lagu qabto Burco 10-kii Bishii Jully ayaa dib u dhacay laba wakhti oo midi kaa hore ahaa, markii labaadna ahayd 24-kii isla bishaa Jully oo aan suurto-gelin.
labada dhinac, ayaan midkoodna si toosa u caddeyn isbedel ku yimi rabitaankii tubta wadahadallada, haddana waxa muuqata in cago-jiid jiro.
Previous PostXiisad ka taagan Kenya guushii Uhuru ka dib Next PostAlshabaab oo dhallinyaro ku toogtay Jammaame